NEWFYPOO EYGA MACLUUMAADKA IYO SAWIRADA - EEYAHA
Newfypoo Eyga Macluumaadka iyo Sawirada
Newfoundland / Poodle ey isku dhafan oo isku dhafan
Mello the Newfypoo (Iskuxidhka Newfoundland / Poodle) ee 8 bilood jir— 'Tani waa Mello 8 bilood ka dib markii uu timaha u jaray. Mello waa mid saaxiibtinimo badan laakiin ma oga sida uu dhab ahaan u weyn yahay. '
Newfypoo ma ahan eey saafi ah. Waa iskutallaab udhaxeysa Newfoundland iyo Poodle . Habka ugu wanaagsan ee lagu go'aamiyo dabeecadda noocyada isku dhafan ayaa ah inaad ka raadiso dhammaan noocyada iskutallaabta isla markaana aad ogaato inaad ka heli karto isku-darka mid kasta oo ka mid ah astaamaha laga helo nooc kasta. Maahan in eeyeyaashan eyda isku dhafan ee la dhalayey yihiin 50% saafi ah ilaa 50% daahir ah. Aad bay caan u tahay in kuwa wax soosaara ay tarmaan iskutallaabno jiil badan .
Olaf shukulaatada iyo Newfypoo cad oo ah 7 bilood jir goobta ciyaarta
Remi madow Newfypoo ah (Newfoundland / Poodle mix) at 1 sano jir- 'Remi waa my Newfypoo oo aan si kalgacal leh ugu tilmaamo Goofypoo. Isagu waa ciyaar, caqli badan, oo jacayl leh. Wuxuu had iyo jeer ahaa mid deggan, xitaa sida eey, oo wuxuu jecel yahay inuu seexdo sida uu jecel yahay inuu ciyaaro. Isagu waa mid cajiib ah oo jecel bulshada iyo eeyaha! Wuxuu jecel yahay inuu dabaasho xagaaga iyo inuu ku ciyaaro barafka xilliga qaboobaha. Wuxuu joogi lahaa banaanka maalintii oo dhan inta lagu jiro xilliga qaboobaha laakiin kuma fiicna kuleylka xagaaga. Muuqaalkiisu si aad ah ayuu isu beddelaa iyadoo ku saleysan sida timahiisa loo jaray. Waxa uu u muuqdaa mid qurux badan leh timo dhaadheer oo dhaadheer laakiin si caadi ah ayaa loo jarjaray si quruxsan u ilaaliya inuu ahaado mid nadiif ah oo qabow gaar ahaan xilliga xagaaga.
Remi the Newfypoo (Iskuxidhka Newfoundland / Poodle) ee 1 jirka ah oo sariirtiisa ku seexanaya hurdo yar.
Remi the Newfypoo (Iskuxidhka Newfoundland / Poodle) ee 10 bilood jira barafka.
Remi the Newfypoo (Newfoundland / Poodle mix) oo ah cunug 3 bilood jir ah.
Hugo the Newfypoo (Newfoundland / Poodle mix) at 1 1/2 sano jir, oo lagu dhajiyay Big Doodle Pups- 'Hugo waa eeyga ugu macaan uguna jecel! Waa wiil weyn, doqon ah oo jecel inuu salaaxo, kubad eryo oo uu ordo oo boodboodo. Wuxuu jecel yahay inuu ku istaago lugaha dambe oo uu ku salaamo qoyskiisa hababka doodle ee ugu fiican abid! Ma daadinayo, dabeecad deggan buu leeyahay, waa wiil edeb leh reerkeenana u keenaya farxaddaas oo kale! Hugo wuxuu si dhab ah u qeexayaa qof weyn oo jilicsan oo kaliya marka cabirkiisu qof dhaawici karo. Wiilkaygu wuu la legdamaa had iyo jeer oo wiilkaygu markuu jabiyo laftiisa qoorta Hugo hal mar kuma dul boodi. Wuu la jiifsaday ilaa uu ka bogsaday kii labaadna wiilkaygu wuxuu ku noqday gurigiisa isagoo wadhafkiisa uun iska og kaliya inay fiicantahay in mar kale la legdamo. Wiil caqli badan!
Hugo the Newfypoo (Newfoundland / Poodle mix) 9 bilood jir wuxuu umuuqdaa Chubaka oo ka socda Star Wars! Hugo waxaa caayay Big Doodle Pups.
Hugo the Newfypoo (Newfoundland / Poodle mix) markuu jiray 2 sano, waxaa cunay Big Doodle Pups
Hugo the Newfypoo (Newfoundland / Poodle mix) oo ah cunug 3 bilood jir ah, oo ay cuneen Big Doodle Pups
Eeg tusaalooyin badan oo ah Newfypoo
Newfypoo Sawirada 1
labradoodle labrador ka badan poodle
eeyaha lab iyo dhaddig oo wada jira
adhijir Jarmal isku dar ah gorgor